Tag: topi-maso mailaka AOL Mail Internet Explorer | Martech Zone
Tag: topi-maso mailaka AOL Mail Internet Explorer
Return Path vs 250ok: Rindrambaiko sy serivisy fanaterana mailaka
Talata, Aogositra 16, 2016 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
Nahoana no zava-dehibe ny fandefasana mailaka? Araka ny Tatitra momba ny kalitaon'ny data momba ny mailaka 2015 avy amin'i Experian, 73% amin'ireo mpivarotra no nitatitra fa manana olana amin'ny famindrana mailaka. Return Path dia nitatitra fa 20% mahery ny mailaka ara-dalàna tsy hita. Tsy isalasalana fa miatrika olana amin'ny fahaterahana ireo orinasa, ary misy fiatraikany ratsy amin'ny faran'ny farany. Nandritra ny taona maro, Return Path no mpitarika indostrialy eo amin'ny sehatry ny fandefasana mailaka tsy misy fifaninanana firy, raha misy. Amin'ny fahatongavan'i 250ok, ary a